SCIENCE TO SOCIETY: कहिले बन्ला त क्रेजी होर्स#CrazyHorse
माथिको फोटोमा देखिएको सेतो आकृति क्रेजी होर्सको बनाउन लागेको स्मारकको नमुना हो. उनीहरुले (अमेरिकन आदिबासी समुदाय) बनाउन सुरु गरेको त करिब पचास बर्ष भन्दा बढी भैसकेको रैछ तर अहिले सम्म टाउको मात्रै बनेको छन्. हामि त्यहा के के न होला, पहाडमा बनेको स्मारक पुरा भैसकेको होला भनेको त होइन रहेछ. यो स्मारक पुरा हुदा १९५ मि. मोटो, १७२ मि. अग्लो हुनेछ, जुन संसारकै सबै भन्दा ठुलो हुनेछ. तर कहिले पुरा हुन्छ कसैलाई थाहा छैन. यो बनाउन लाग्ने खर्च मान्छेहरुले दिने दान बाट उठाउने रैछन. सरकारी पैसो नलिने घोसना गरेका. त्यसैले धेरै लामो समय लागेको. सरकारी पैसो नलिने बाटै मैले के बुझे भने, यिनीहरु कति रिसाका रैछन सरकार सित भनेर. हाम्ले पनि अलि कति दान देर आइयो. एउटा गाडीको करिब पच्चीस डलर. खासा तेहा हेर्न लाइ एउटा museum थियो. तेती मात्रै हो. मेरो शुभकामना छ कि उनीहरुको यो कार्य पुरा होस्.